WeMinority shareholder - ungumnikazi iphakethe-non-elilawulayo kwamatayitela enhloko-dolobha sisekelo inkampani. Kungaba kufanele inikezwe njengoba umuntu ngokomthetho, futhi umuntu oyedwa. isithakazelo Noncontrolling akukuniki umnikazi walo ithuba iqhaza ukuphathwa kwenhlangano, isibonelo, amalungu abakhethiweyo bakwa-eBhodini Labaqondisi.
Isikhundla enamasheya minority joint-isitokwe inkampani
Njengoba bamasheya ngezigxobo encane hhayi kungaba umhlanganyeli egcwele yokulawulwa kwezinkampani, ukuxhumana yayo nge Majority nzima. Umninimasheya ukulawula kunganciphisa ukubaluleka amasheya kwezinkolo ezincane bamasheya, ngokuletha amafa inhlangano third-party ngawo bamasheya encane ngalutho. Ukuvimbela zimo futhi ukusungula Ubudlelwano phakathi kwabanikazi bamasheya sisonke emazweni ophucukile kunesiqiniseko esingokomthetho amalungelo wabanikazi be-amaphakethe ukulawula non-.
Umkhuba ezweni Ukuvikelwa kwezinkolo ezincane bamasheya
Umthetho uhlinzeka ngamazwe athuthukile ukuvikelwa kwezinkolo ezincane bamasheya kusukela ekuthengisweni ophoqelelwe kwamatayitela abanikazi amabhlogo enkulu eziphansi uma yokugcina enquma ukuthenga sonke nokwabelana. Ezimweni eziningi, ukuvikelwa kwezinkolo ezincane bamasheya ukunciphisa bamasheya iningi kanye neBhodi yabaNqophisi amathuba kabi amandla abo. Zonke kwezinkambiso eyasungulwa imithetho, zenzelwe ukunweba amandla kwabanikazi bamasheya amancane ezinhlanga bayabandakanyeka ekulawulweni kwenqubo.
Ngokuvamile, umthetho ukunika amalungelo okukhulu eqenjini bamasheya ukuze uqale iphendukele lokuqola yenkampani, befuna buyiselo lamasheya abo ngentengo ephakeme usongo umbango.
amalungelo minority Russia
Umthetho kahulumeni iqukethe imithetho yokuvikela esizweni esincane bamasheya. Okokuqala, lokhu kuvikela kuhlanganisa kulondolozwe kuzo ezizimele, geqé esimweni yokuhlangana noma kombuso. Phakathi izinqubo ezinjalo, umnikazi wamasheya amancane ezinhlanga angaba isiphukuphuku ngenxa ukuncishiswa isihlobo buqhathaniswa yayo isakhiwo esisha. Lokhu kuholela ukwehla ezingeni umthelela wabo izindikimba ezilawulayo.
Umthetho uhlinzekela izinyathelo ezilandelayo:
Kwaphela izinqumo akudingeki 50%, futhi u-75% wamavoti bamasheya, umbundu lingavuswa ngisho ephakeme kwezinye izimo. Lezi zixazululo zihlanganisa: izinguquko kulo mthetho-sisekelo, kuhlela kabusha noma kuvalwe nenkampani, belinganisa ububanzi begodu nesakhiwo umagazini omusha, ukuthengwa yinkampani kwamatayitela ayo, ukuvunyelwa ezinkulu impahla ukuthengiselana, ukuncishiswa ukwabelana okuzisholo nge ukunciphisa ohambelana inhlokodolobha ogunyaziwe, nokunye ..
Ukhetho ukuba ibhodi labaqondisi kufanele iqhutshwe ukuvota ezuziwe. Ngokwesibonelo, uma umnikazi wamasheya esizweni esincane ungumnikazi 5% wamasheya, angase ukhetha 5% emzimbeni.
Uma ubhekene ukuthenga ukwabelana safinyelela 30, 50, 75 noma 95% azo zonke izibambiso esikhishwe, kumele anikeze umthengi ilungelo nabanye abanikazi izibambiso inkampani simthengise amasheya abo ngentengo emakethe noma kangcono.
Uma umuntu aba ngumnikazi wayo 1% noma ngaphezulu ukwabelana, kungaba avele enkantolo ngenxa inkampani ngokumelene ubuholi uma kwenzeka ukulahlekelwa incurring ngenxa iphutha abaqondisi ngu bamasheya.
Uma umninimasheya has 25% lamasheya noma ngaphezulu, kufanele ukufinyelela imibhalo kanye namarekhodi iyawakha phezu imihlangano yebhodi.
Ukungqubuzana phakathi abanikazi bamasheya kanye nemiphumela yabo
Inkampani ukuzinza kanye obala yezenzo zalo nomthelela omuhle intengo isitokwe futhi elikhangayo zimali. kumangala eminingi amacala obugebengu ukuphathwa kwabasebenzi kanye bamasheya, lephula imithetho abantu kohlaka amandla athile has nomphumela ohlukile.
Uma umninimasheya amancane ezinhlanga noma iqembu ungumnikazi abangaphezu kuka-25% esigxotsheni, futhi izithakazelo ukuthi zehluke iningi izintandokazi, ikakhulukazi lapho kwemukelwa khona izinqumo ezibalulekile lapho udinga okungaphezu nje kokuba u-75% futhi, kunzima kakhulu.
Uhlobo oluvame kakhulu libizwa izingxabano yenkampani greenmail. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa - akalutho kodwa lokuqola ngumuntu onamasheya amancane. It has a ezihlukahlukene izimpawu futhi kungaba sina ukhotha ukuzinza ngaphakathi enkampanini.
Greenmail kusho ukuthi oyedwa noma ngaphezulu amancane ezinhlanga shareholder abambalwa, united eqenjini sebeqala basuse zonke izinqumo ezibaluleke inkampani. Lihlanganisa izenzo ngenhloso eziholela yokuthi inkampani ukukhokha imali eshisiwe. Ngaphezu kwalokho, abanikazi bamasheya esizweni esincane bayakwazi Roll izindleko ngo- izindlela ezahlukene ezikhona kubo.
Ekugcineni greenmail sehliselwe omunye izinjongo ezimbili: ukuze athuthukise izithakazelo zabo futhi ukuthola ukulawula inkampani, noma ukuphoqa bamasheya iningi ukuthenga emuva okwabiwe bamasheya encane ngamanani ngokungenangqondo okusezingeni eliphezulu.
Mncintiswano Perfect abangaphelele: ubunjalo, izici, imodeli oluyisisekelo
Umbala eziyivelakancane kwamehlo - kuyini?